China Ringlock Scaffolding factory na suppliers | Uzoigwe
Luowen Ring mkpọchi Scaffolding bụ ọhụrụ ụdị scaffolding, tumadi mejupụtara Ring efere, ọkọlọtọ, Ledger, nkwado na ngwa, ọ bụ nnọọ anabata na ụwa ahịa, n'ihi na nke uru na ọtụtụ ebe.
1.Simple Ọdịdị: Akụkụ ndị dị na mbụ gụnyere ọkọlọtọ, litger, ọ dị mfe ịgbakọta ma gbasasịa, yana dịkwa mfe nchekwa, nyefee ma debe ya.
2.Flexible na mwube: E nwere 8 oghere nke mgbanaka efere, ya mere, Ledger na nkwado nwere ike itinye n'ime mgbanaka efere na ihe ọ bụla direction na ihe ọ bụla ụkpụrụ, n'ihi ya, ọ nwere ike nweta ihe ọ bụla arịrịọ nke na-ewu.
3.Multi iji: Dabere na ihe a kapịrị ọnụ na-ewu, Mkpọchi mkpọchi Scaffolding nwere ike kpọkọta n'ime otu ma ọ bụ abụọ n'usoro na dị iche iche nha, ọ nwekwara ike-eji maka multi-ewu ngwá ọrụ, dị ka na-akwado etiti, na-akwado kọlụm, ihe eweli etiti, ogbo na-akwado, wdg
4.High loading: The ọkọlọtọ actuates axially, nke a na-eme ka scaffolding na atọ akụkụ ohere, elu ike na otu ebe nke ihe owuwu. Efere mgbanaka ahụ dị mma na ịkpụcha ahịhịa axial, ma na-eme axis nke ọkpọkọ ọ bụla n'otu efere, ya mere ọ na-eme ka 15% dịkwuo ike ma na-arụ ọrụ mgbe niile.
5.Re-eji: A na-eji akwa dị elu mee ka ihe eji ebu Luowen, ha anaghị adị mfe imebi ma ọ bụ pụọ n'ụdị, yabụ enwere ike iji ya ugboro ugboro.
Sclock Scoldolding bụ ụdị scaffolding ọhụrụ, nke ewepụtara site na Europe na 1980s ma bụrụ ngwaahịa emelitere mgbe etolite cuplock. A makwaara dị ka sistemụ mpịakọta rosette, sistemụ nkwụnye nkwụnye, layher frame (etiti oyi akwa, n'ihi na ụkpụrụ nke scaffolding bụ nke ụlọ ọrụ German LAYHER mepụtara.) scaffolding, ọkọlọtọ rosettes na dayameta nke 133mm na ọkpụrụkpụ nke 10mm.Rosette nwere oghere 8. Akụkụ bụ isi bụ φ48 * 3.5mm na Q355 pipe pipụ. Akwụkwọ a na akwụkwọ ndekọ mara mma mara mma nwere aka jikọọ na ala. A na-eme akwa ahụ site na nkwụnye ọkụ na ntanye na nsọtụ abụọ nke pipụ nchara.
Nke gara aga: N'ogbe Ahịa Plastic Formwork Na Construction - H Doo System - Zhongming
Osote: 63.5 # ígwè nchara
Cuplock Scaffold Akụkụ
Cuplock Sdị Scaffolding
Scaffolding Na Cuplock
Scaffolding Kemeghi ịghasa Jack, Akụkụ Ulo olu nke Ringlock, Ringlock Scaffolding mgbodo, Kwikstage Scaffolding Ngwa, Nrụgide oru Ringlock Scaffolding, Metal Cuplock Scaffolding,